बहस १ : माओबादी – एमाले पार्टी एकतापछि जबज र माओबाद के हुन्छ ?::त्रिशुलीखवर
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन अहिले निर्णायक मोडमा छ । दुईवटा प्रमुख कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादीको एकताको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको समाचार आईरहँदा अब बन्ने नयाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त र नेतृत्व कसरी व्ब्यवस्थापन हुन्छ भन्ने सर्वत्र चासो छ । माओवादी बृत्तभित्र माओवाद र जनयुद्धलाई हेर्ने सवालमा एकतापछि बन्ने पार्टीले तलमाथि गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ भने एमालेभित्र जबजको सैद्धान्तिक निरन्तरता र के पि ओलीको नेतृत्वको निरन्तरता हुन्छ कि हुदैन भन्ने चिन्ता छरिएको पाईन्छ ।हामीले माओबादी र एमाले पार्टी एकतापछी माओबाद र जबज के हुन्छ ? भन्ने सबाल माओबादी तथा एमालेका युवा नेताहरुसग कुराकानी गरेका छौ ।
एमाले युवा नेता निर्मल भट्टाराईसग गरिएको कुराकानी:
एमाले र माओवादी पार्टी एकीकरण हुँदा माक्र्सवाद लेनिनवाद त दुवैले मान्छन्, एमालेले मान्ने जबज र माओवादीले मान्ने माओवाद के हुन्छ ?
हामीले ऐतिहासिक रुपमा यी दुईलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ। ऐतिहासिक रुपमा भन्दा अहिलेको माओवादी केन्द्रले माओवादलाई मान्दै आयो र एमालेले तत्कालिन मालेले नौलोवाद हुँदै जनताको बहुदलीय जनवाद मान्दै आयो । ती मान्दै जाने क्रममा अनुभवले के देखायो भने अबको कम्युनिष्ट आन्दोलन एकदलीय तानाशाही तथा एकदलीय अधिनायकत्व हिसाबमा चल्दैन । माओ विचार- वाद जे भनेपनि त्यसले दोस्रो विश्वयुद्धताका चीनमा एउटा सत्ता कायम भयो । अब त्यसलाई अरुहरुले सत्ता कब्जा पनि भन्ने गरे पनि त्यसलाई सत्ता कायम गरेर अहिलेसम्म आएको छ । त्यो एउटा घटनाक्रम हो । तर अहिलेको एक्काइसौं शताब्दीको संसारमा त्यसरी सत्ता कब्जा गर्ने सम्भावना छैन । त्यसरी सत्ता कब्जा गरेर वा कथमकदाचित सत्ता कब्जा भइहाल्यो भने पनि चलाउन सम्भव छैन किनभने अहिले मानिसहरु स्वतन्त्र हुन चाहन्छन् लोकतान्त्रिक हुन चाहन्छन् र आफुलाई शासन गर्ने सत्ता आफुले अनुमोदन गरेको आफ्नो मतदानबाट बनेको संविधान होस् भन्ने चाहन्छ ।
त्यो चाहनालाई हेर्ने हो भने अहिलेका कम्युनिष्टहरुले पनि अब सत्ता सन्चालनमा कब्जा गरेर अरुलाई निषेध गरेर विपक्षीहरुलाई निषेध गरेर फरक विचारहरुलाई निषेध गरेर सत्ता सञ्चालन गर्न सक्दैन । मदन भण्डारीले ०३९ सालमा भन्नु भएको यही नै हो हामीलाई पनि त्यतिबेला के लाग्दथ्यो भने यसरी त कसरी हुन्छ? कम्युनिष्टहरुले कसरी चुनाव जितेर सत्ता सन्चालन गर्न सक्दछ ?कसरी चुनाव जित्छ ? पुँजीपतिहरुले जितिहाल्छ भन्ने लाग्दथ्यो । म अहिले पनि लिलामणि पोखरेलले भाषण गरेको सम्झन्छु । उहाँले संसद भनेको त खसिको मासु देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो भनेको सम्झन्छु । तर भयो के भने अबको संविधान यसैगरी सञ्चालन गर्नुपर्ने रहेछ । जो एमाले र माओवादीले जितेर आए यसले के देखाए भने चुनावबाट पनि कम्युनिष्टहरुले सत्ता सन्चालन गर्न सम्भव छ ।
त्यसो गर्नका लागि जनताको बहुदलीय व्यवस्था सबभन्दा महत्वपूर्ण र व्यवहारिक छ । अब माओवाद के भने लडेर सशक्त संघर्ष माफर्त सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा दलाल पुँजीवादी वर्गलाई र साम्राज्यवादी शक्तिहरुलाई परास्त गरेर सत्ता निर्माण गर्ने विज्ञान हो र त्यो विज्ञानले काम गरेन । नेपालको सन्दर्भमा पनि आन्दोलन उठे धेरै कुराहरु भए राजतन्त्र फालियो, दुरदराजमा भएको मानिसहरुले पनि अधिकार पाए । तर पनि माओवादीले कल्पना गरेको जस्तो सत्ता त आएन । यो के भने जनताले परिकल्पना गरेको सत्ता नै नेपालमा आयो । अबको भोलीको बाटो नाम जे भए पनि नाम त फरक पनि हुन सक्छ तर बहुदलीय जनवाद भएको ठाउँमा अर्कै केही जनवाद भनिएला अथवा त्यसको ठाउँमा केही कार्यक्रम बनाउँदा फरक हुनसक्ला । विशेषताको हिसाबले भने बहुदलीय जनवादी विषयको विशेषतालाई नै मानेर अघि बढ्नु आवश्यकता छ र बामगबन्धन यसपाली भयो बामगबन्धन लडेर सत्ता कब्जा गर्नको लागि सशस्त्र विद्रोह-कब्जा गरेर भएन । यो बामगठबन्धन के गरेर भयो भने चुनाव जितेर सत्ता सञ्चालन गर्न भयो ।
पार्टी एकतासहितको सत्ता सञ्चालन गर्ने भन्ने हिसाबले त्यो गठबन्धन हुँदैछ । चुनाव गरेर सत्ता कब्जा गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यो जनताको बहुदलीय जनवादले प्रष्ट रुपमा भन्ने विषय नै हो । अबको सत्ता संवैधानिक हुँदैछ र मानवअधिकारयुक्त हुँदैछ । अबको सत्ता कानुनी राज्यको आधारमा भएर हुँदैछ । त्यसैले विशेषताको हिसाबले अब माओवादको विशेषता बोकेर माओवादको सत्ता सञ्चालन गर्न नसक्ने भएको हुनाले प्रचण्ड- केपी ओली दुई वटा पार्टीको अहिलेको एकता भनेको नै हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्छौं र त्यसैको आधारमा समाजवादको आवश्यक बाटो तयार गर्छाै र अघि बढ्छौं भन्ने उहाँहरुको घोषणा हो। तर जनताको बहुदलीय जनवाद मैल(माओवादी) माने भन्दा पार्टीमा केही समस्या रहन्छ । किनभने अझै पनि लडेरै सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ । अहिले पनि हिजोकै तरिकाले चीनमा लडेर सत्ता कब्जा गरेझै सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ । नयाँ जनवाद नै स्थापना गर्नुपर्छ । र संसदवादलाई मान्न हुँदैन भन्ने झिनो स्वार्थ माओवादी भित्रभित्र हिजोका विभिन्न भगलाहरु कतिले भनिराखेका छन् । किरजीले, विप्लवजीले भनिराख्नु भएको छ ।
त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई अलि सतर्कता पूर्वक लानु पर्ने त छ तर मान्नु पर्ने कुरा भनेको त्यही (जबज) नै हो त्यो भन्दा अर्काे बाटो देखिन्न । त्यो स्थिति नै हो त्यसकारण माक्र्सवाद लेनिनवाद मानेर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्न जाने भन्ने बित्तिकै माक्र्सवाद लेनिनवाद र जनताका बहुदलीय जनवादहरुलाई मानेरै सत्ता सञ्चालन गर्ने भन्ने नै घोषणा हो । बामगठबन्धनको त्यसमा सहमती हो । फेस सेभिङको लागि वैचारिक कार्यक्रमहरुको नामाकरण गर्दा त्यसको रोडम्यापलाई निर्माण गर्दा जनतालाई कहिलेकाही जनवाद नभनिन पनि सक्छ । तर विशेषत त्यो सार्वभौमिक भइसकेको छ । संसारको कम्युनिष्ट पार्टीले जित्ने भन्यो भने त्यतिबेला मदन भण्डारीलाई सम्झनु पर्ने हुन्छ । जनताको बहुदलीय जनवादलाई सम्झनु पर्ने हुन्छ । किनभने त्यसो नगरीकन कम्युनिष्ट पार्टीले शासन गर्न सक्दैन । चीनको कम्युनिष्ट पार्टीको कोरियाको कम्युनिष्ट पार्टीको अथवा भेतनामको कम्युनिष्ट पार्टीको एउटा ऐतिहासिक कुरा छ । उनीहरुले अफ्नै ढंगले सत्ता कब्जा गरेर शासन गर्दै आए । त्यो उनीहरुको आफ्नै इतिहास छ । त्यहाँ देखि बाहेकका कुराहरु तपाईले कम्युनिष्ट पार्टी गठन गरेर सत्तामा जान्छु भन्ने हो भने यही बाटो हो । अहिले अमेरिकातिर पनि त्यसरी नै सत्ता बनेको छ । तर त्यसको विशेषता र नेपालको जबजको विशेषतामा पनि समग्रता छ । त्यसमा पनि बामपन्थीहरुले जितिरहेको छ सत्ता चलाइराखेका छन् । त्यसको विशेषता र हाम्रो अहिलेको विशेषता मिल्न जान्छ । त्यसो भएर यो विषयलाई कुनै इगोको विषय नबनाएर वा यो मदनभण्डारीले वा एमालेले ल्याएको विषय नभनेर यसलाई अझ समृद्ध तरिकाले अघि बढाउनु पर्छ ।
अहिले एमालेमा पनि जबजको च्याप्टर क्लोज भयो भनिन्छ ? र माओवादीमा पनि माओवाद किन चाहियो भनिन्छ ? कसैले माओवाद आवश्यक छ भनेका छन् त कसैले जबज आवश्यक छ भनेका छन । तपाई के भन्नुहुन्छ ?
मैले अघि पनि चर्चा गरे कि जबजको विशेषतालाई हामीले बोकेर अघि नबढीकन सुख छैन । किनभने च्याप्टर क्लोज भन्नुको अर्थ हामी कम्युनिष्टहरुले सत्तामा जाने बेलामा अबको ५ वर्ष पछि चुनाव लड्छौं कि लड्दैनौं, चुनाव लड्छौं भने त्यहाँ जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा अघि आउँछ । कम्युनिष्टहरुले संसारका दुईवटा स्कुलिङमा एउटा सत्ता कब्जा गर्ने र अर्को चुनाव लड्ने स्कुलिङ पाइन्छ । त्यसमा अहिलेको संसारमा चुनाव लडेर जित्ने स्कुलिङ नै पाइन्छ । रसिया, पूर्वी युरोपमा पनि यो अवस्था छ । चुनाव लडेर सत्तामा जाने चुनावबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने भन्ने कुरा रहेसम्म कम्युनिष्टहरु त्यहाँबाट बाहिर गएर अर्कै तरिकाले सत्तामा पुग्ने कुरा गरे भने त्यतिबेला जनताको बहुदलीय जनवादको अन्त्य होला नत्र भने शक्ति सन्तुलनको हामी कुरा गर्छाै, संविधानवादको कुरा गर्छाै, कानुनी राज्यको कुरा गर्छाै त्यसपछि आवधिक निर्वाचनको हामी कुरा गर्छाै भने त्यतिबेला जनताको बहुदलीय जनवादको च्याप्टर क्लोज भएको मानिन्न ।
अब प्रचण्डजी हिजो माओवाद बोकेर आउनुभयो माओवादका सारा विज्ञानहरुलाई जनयुद्धमा प्रयोग गर्नुभयो । लडाइ लड्ने कुरामा माओले लेखेका सुत्रपत्र गरेका युद्धसम्बन्धि ज्ञानहरुको उहाँले प्रयोग गर्नुभयो तर पनि अन्तिममा सत्तामा पुग्ने बेलामा उहाँ पनि चुनावै लड्नुभयो । जब चुनाव लड्न कम्युनिष्टहरु राजी हुन्छन् चुनाव लडेर सत्तामा जान कम्युनिष्टहरु राजी हुन्छन् भने त्यसलाई सोझै वा घुमाउरो तरिकाले जनवादलाई मानेको जस्तो लाग्छ । तपाईले एउटा कुरा के सम्झनु पर्छ भने कम्युनिष्टहरुले संसदलाई कसैले उपयोग गर्ने भने कसैले आत्मसात गर्ने भने । मदनभण्डारीले संसदलाई आत्मसात गरेर जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो । अन्य कम्युनिष्टहरुले संसदलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्नुभयो धेरै लामो समयसम्म । किरणजीले संसदलाई उपयोग पो गर्ने हो त्यहाँ गएर भासिने हारे भनिराख्नु भएको छ । उपयोग गर्नुको अर्थ कुनै घर भित्र छिरेर घर भत्काउने कुरा उपयोगसँग सम्बन्धित छ ।
कुनै घरभित्र छिरेर त्यो घरलाई राम्रो बनाउने कुरा चाही आत्मासात गर्ने कुरा छ । मदनभण्डारीले भनेको कुरा के छ भने संसादभित्र छिर्ने हो संसदमा क्रान्ति ल्याउने हो राम्रो बनाउने हो भन्नुभएको छ । तर अरु कम्युनिष्टहरुले के भन्यो भने संसदभित्र छिर्ने संसदको भण्डाफोर गर्ने र त्यसलाई ध्वस्त गर्ने भन्ने खालको कुरा आयो । त्यसो हुनाले अहिलेको संसद जुन बनाएका छौं केपी ओली, प्रचण्ड र अरु कम्युनिष्टहरु मिलेर जुन बनाए संविधान संसद जे बनाए त्याो सत्ता ध्वस्त गर्नका लागि हामी सत्तामा जाँदैछौं वा त्यसलाई अझै सामाजिक रुपान्तरणको निम्ति जनताको पक्षमा काम गर्न जाँदैछौं । यदी जनताको पक्षमा हामी काम गर्न जाँदैछौं भने मदनभण्डारीले भनेझै घरभित्र छिरेर घर आफ्नो बनाउने सिद्धान्त हो कि घरभित्र छिरेर त्यसलाई भत्काउने सिद्धान्त हो ?
भत्काउने त पक्कै हाम्रो सिद्धान्त होइन । त्यसो हुँदा यो विषय रहुन्जेसम्म घरलाई राम्रो बनाउने अथवा सबैको पक्षमा जनवादी बनाउने र संसद भित्र छिरेर संसदलाई सबैको पक्षमा बनाउने संसदलाई सँधै क्रान्तिकारी संसद बनाउने हो भने त्यो जनताको बहुदलीय जनवादले निर्देशित गरेका भनेका सैद्धान्तिक अवधारणाहरुसँग सम्बन्धित छ । त्यसले गर्दा यो कसरी च्याप्टर क्लोज हुनसक्छ । च्याप्टर क्लोज हुनुको अर्थ त के हो भने भ्याकुम गर्ने कुरा हा,े खाली गर्ने कुरा हो । अबको अगाडि सिद्धान्तको कुरा छैन भन्ने कुरा हो । माओवाद जब तपाई चुनाव लड्न सुरु गर्नुभयो जब प्रचण्डले चुनाव लड्न सुरु गर्नुभयो , माओवादी केन्द्रल े जब चुनाव लड्न सुरु ेगर्यो तब माओवाद त्यही सकिसकेको छ । त्यही त्यसको सान्दर्भिकता सकिसकेको छ । अब पनि माओवाद भन्नुको अर्थ त के हो भने मैले अरुे ठाउँमा पनि भन्ने गरेको छु ,यो त दौरा सुरुवालमाथि टाई लगाउनु जस्तै हो ।
दौरा सुरुवाल लाइसकेपछि टाई लाउनु राम्रो हो सुहाउछ पनि तर दौरा सूरुवालमाथि भने टाई एकदम बेकार हो । माओवाद ठिकै हो र सान्दर्भिक पनि होला तर सत्ता कब्जा गर्ने ठाउँमा त्यो सान्दर्भिक होला । चुनाव लडेर सत्ता प्राप्त गर्ने कुरामा माओवाद सकिसकेको हुन्छ । बोर्डर लाइन नै क्रस गरिसक्नु पर्छ तपाईले त्यसकारणले गर्दा जनताको बहुदलीय जनवादको च्याप्टर क्लोज भएको छैन । अहिलेको एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी जुन एमाले र माओवादी बनाउँदैछ त्यसको लागि माओवादको च्याप्टर क्लोज भएको छ तर जनताको बहुदलीय जनवादको च्याप्टर क्लोज भएको छैन । जहाँसम्म रुपको कुरा अघि मैले भने रुपको कुरा त फरक हुन सक्छ । नामको कुरा त फरक हुन्छ नामको कुरा भएन । त्यसको सारको कुरा तपाईले जोगाउनु भयो भने बहुदलीय जनवादको कुरा तपाईले जोगाउनु भयो भने नाममा खासै जुहारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।